Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'izao tontolo izao ao amin'i Richard Wagner | Bob Dylan - Fikarohana momba ny vatana teraka
Proposed by: Walter Semkiw, MD, Novambra 2013
Hatramin'ny nanombohako niasa tamin'i Kevin Ryerson tao amin'ny 2001, nanontany tena aho hoe iza i Bob Dylan no teo amin'ny fiainany taloha, noho ny fiantraikany ara-kolontsaina.
Rehefa miasa amin'ny ordinatera aho dia mihaino mozika mieli-patrana, anisan'izany ny fantsona Bob Dylan. Nalahelo aho noho ny kalitaon'ny mozikany mandrakizay, izay mampifandray tantara mampihetsi-po sy mahafinaritra miaraka amin'ny hira mahafinaritra. Nitranga tamiko fa tahaka ny opera miniature ny hirany.
Tamin'ny alàlan'ny asako miaraka amin'i Ahtun Re, fanahy iray nampitain'i Kevin, na dia efa fantatsika aza ny fisian'ny zava-bita ankehitriny nataon'ireo mpanoratra tantara an-tsoratra maro, dia tsy nametraka ny lalao ho an'i Richard Wagner, tompon'ny Opera. Nanana ny eritreritra na ny fisainana aho fa i Bob Dylan no mety ho teraka indray ao amin'ny vatana vaovao, Richard Wagner.
Raha namaky momba an'i Wagner aho, dia naheno fa tsy manam-paharoa teo anatrehany izy, ny mpihira opera dia nanorina mozika ho an'ny opera, fa miankina amin'ny hafa kosa hanoratra ny libretto, tantara na tononkalo ho an'ny opera. Nanoratra ny mozika, ary koa ny libretto, ny tononkalon'i Wagner ho an'ny opera, i Wagner. Mifanaraka amin'i Bob Dylan izay mamorona hira mahafinaritra, sy tantara lalina, ho an'ireo hirany.
Nandritra ny fotoana nifanaovana tamin'i Kevin Ryerson dia nanamafy i Ahtun Re fa i Bob Dylan no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Richard Wagner. Nanontany an'i Ahtun Re aho hoe maninona no tsy nomeny ity lalao ity taloha. Namaly izy fa tranga fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao io ary tiany ho ahy irery ny mamantatra azy, izay raha jerena aloha dia tiako.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Na dia tsy ny lalao ara-batana tsara indrindra aza izany dia misy fitoviana amin'ny firafitry ny taolana eo amin'i Richard Wagner sy Bob Dylan. Ny fisehoan'ny endrika dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny maodelin'ny angovo fanahy sy ny antony ara-nofo. Ny lovan'i Wagner dia i Aryan sy Alemanina, raha i Bob Dylan kosa dia manana fianakaviana jiosy, izay afaka mitantara ny tsy fitovizan'ny firafitry ny sela malemy.
Talenta momba ny fiainana taloha: Araka ny nomarihina, ny fahakingan'i Richard Wagner tamin'ny fampifangaroana ireo gadona tsara amin'ny tantara na ny tononkira mahaliana dia hita taratra amin'ny hiran'i Bob Dylan.
Fiovana amin'ny finoana, ny maha-firenena ary ny fiaraha-monina: Alemà sy Kristiana i Richard Wagner, ary i Bob Dylan dia teraka ho fianakaviana jiosy any Okrainiana.